Home Wararka MW Erdugan oo Sarkaal Sare oo Mareykan ah Eedeyn Kulul u Soo...
MW Erdugan oo Sarkaal Sare oo Mareykan ah Eedeyn Kulul u Soo Jeediyey.
Madaxweynaha Turkiga Reccep Erdogan ayaa si toos ah ugu eedeeyey sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ee Mareykanka “inuu taageero oo uu maamulo” kooxaha mintidiinta ah, sida kooxda kurdishka ee PKK.
Erdogan ayaa weriyayaasha u sheegay in Brett McGurk, oo ah isku xiraha Golaha Amniga Qaranka Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika uu aad ugu dhow yahay kooxda PKK ee Turkiga, iyo kooxda kale ee xiriirka la leh ee YPG ee dalka Syria.
“Waxa uu xaqiiqdii taageerayaa argagixiso,” ayuu Erdogan yiri. “Waa agaasimaha PKK iyo YPG. Dabcan hadalkeyga wuxuu walaacin doonaa dadka qaar. Waan ognahay taas.”
Erdogan ayaa sheegay in McGurk uu si toos ah ula shaqeynayo kooxaha argagixisada ee gobolka.
“Arrintan aad ayey ii dhibeysaa, wuxuu hub ka qeybinayaa gobol aan isku dayeyno inaan argagixisada ka xaalufino,” ayuu yiri.
McGurk oo maamulladii Trump iyo Biden u qaabilsanaa ergeyga ka hortagga argagixisada Daacish, ayaa loo arkaa inuu yahay maskaxda isku xireysay Mareykanka iyo kooxda YPG ee Syria intii ay dagaalka kula jireen Daacish.